Tao anatin’ny hafaliana tanteraka no nandraisan’ny Ben’ny tanàna Rado Ramparaoelina izany noho izy nahazo vokatra tsara indrindra tamin’ny taom-pianarana lasa teo nandritra ireo fanadim-panjakana rehetra notanterahina. Tafiditra ao anatin’ny fitazonana ny vokatra ny nananganany lycée vaovao ao Ankaditany. Mbola fanamby goavana ihany koa ny hanaovana « salle médiatheque » vaovao ao an-toerana miaraka amin’ny laboratoire de langue. Ny hanampy ny mpianatra no tanjona tsy handaniany vola hianarana teny vahiny intsony. Nomarihin-dRamparaoelina Rado fa hiompana tanteraka amin’ny fikarakarana ireo EPP sy CEG manana olana rehetra ao anatin’ny kaominina indray izy ireo amin’ny taona ho avy io ho tombontsoan’ny mpianatra rehetra. Mpampianatra nahavita be miisa 28 no notolorana mari-boninahitra izay an’ny fari-piadidiam-pampianaran’Atsimondrano avokoa. Tokony ho 400 izy ireo fa noho ny tsy fahatomombanan’ny taratasy dia ireo ihany no tratra. Tonga nanotrona ny lanonana ny filohan’ny Antenimieram-pirenena Jean Max Rakotomamonjy.